RN-2: nametrahana sakana ara-pahasalamana | NewsMada
RN-2: nametrahana sakana ara-pahasalamana
Nandray andraikitra nametraka sakana ara-pahasalamana hisorohana amin’ny tsy hiparitahan’ny valanaretina”Codiv-19″ eto Toamasina ny tompon’andraiki-panjakana eto an-toerana. fanapahan-kevitra izay kianin’ny maro ho tara ihany, satria ny alahady teo vao natao izany. “Efa tamin’ny zoma no nisian’ny fiaramanidina farany avy any ivelany koa raha olona tonga tamin’ izany, hody ho ety Toamasina dia efa tonga teto ny asabotsy. Raha ireo tonga ny alakamisy kosa dia efa teto an-toerana, ny zoma maraina, koa sakana ara-pahasalamana amin’ny fomba ahoana no hapetraka eto?” hoy ireo naneho hevitra.
Akilany, somary nisehoan’ny fahasahiranana ihany ny mpiasan’ny fahasalamana eo amin’ny fanarahana sy fikarohana ireo olona miisa 70 niara-dia tamin’ ilay fiaramanidina, tonga ny alakamisy teo ka tsy nanao fitokana-monina tao Antananarivo kanefa dia tsy hita popoka izay misy ny ankamaroan’izy ireo.
Tsy vitan’ izay fa hita tamin’ny” manifold” an’ireo mpitatitra avy any Antananarivo ihany koa, ny alahady teo, saika fanampinan’anarana sy anaram-bositra tsy misy adiresy sy laharana finday tamin’ ireo manifold, izay tsy mifanaraka amin’ny fepetra nampetraky ny Att sy ny fitondram-panjakana. Raha ny fanazavan’ny talem-paritry fahasalamam-bahoaka, Rakotoarimanana Raymond, rahateo dia efa misy any Foulpointe sy Vatomandry ary Mahanoro izy ireo fa tsy azo antso.
Nandritra ny fidinana ifotony tetsy Sarimasina RN-2 amin’ny fidirana ny tanànan’ i Toamasina kosa, nilazan’ny governoran’ny Faritra Atsinanana ny tokony hifanampian’ny rehetra sy hanarahana ny toromarika avy amin’ny filoham-pirenena sy hifanakalozam-baovao. An-daniny, misendra olana ihany ny sampandraharahan’ny fahasalamam-bahoaka amin’ny toerana hatokana fandraisana ny marary sy hiasan’ny mpiasan’ny fahasalamana fa dibodrano ny faritra nanaovana ny trano heva etsy amin’ny hopitaly manara-penitra.